Ndị mmụọ ozi bịakwutere Jekọb (1, 2)
Jekọb jikeere ịga hụ Ịsọ (3-23)
Jekọb na mmụọ ozi gbara mgba (24-32)
Aha Jekọb ga-abụzi Izrel (28)
32 Jekọb lawaziri, ndị mmụọ ozi Chineke wee bịakwute ya. 2 Ozugbo Jekọb hụrụ ha, ọ sịrị: “Ndị a bụ ndị agha Chineke.” N’ihi ya, ọ kpọrọ ebe ahụ Mahaneyim.* 3 Jekọb zipụziri ndị ozi ka ha buru ya ụzọ gakwuru Ịsọ nwanne ya n’ala Sia,+ bụ́ ebe a na-akpọkwa Ịdọm.+ 4 Jekọb nyere ha iwu, sị: “Ihe a bụ ihe unu ga-agwa onyenwe m Ịsọ, ‘Ohu gị Jekọb kwuru, sị: “Ebiela m n’ụlọ Leban ogologo oge.+ 5 Enweela m ehi, jakị, atụrụ, na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-eje ozi.+ Ana m ezitere onyenwe m ozi a ka ihe m wee masị gị.”’” 6 Mgbe e mechara, ndị ozi ahụ lọghachikwutere Jekọb, sị ya: “Anyị gakwuuru nwanne gị Ịsọ, ọ na-abịakwa izute gị, ya na narị ụmụ nwoke anọ (400) so.”+ 7 Ezigbo ụjọ wee jide Jekọb, ya echegbuwe onwe ya.+ N’ihi ya, o kewara ndị ya na ha so nakwa ìgwè ewu na atụrụ ya na ehi ya na kamel ya ụzọ abụọ. 8 Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na Ịsọ alụso otu ìgwè ọgụ, ìgwè nke ọzọ ga-agbalaga.” 9 Jekọb kpeziri ekpere, sị: “Chineke nke nna m Ebreham na Chineke nke nna m Aịzik, Jehova, ọ bụ gị gwara m, sị, ‘Laghachi n’ala gị, laghachikwuru ndị ikwu gị, m ga-emekwara gị ihe ọma.’+ 10 Ma, erughị m eru ka ị hụ ohu gị n’anya otú a ma meere m amara niile a,+ n’ihi na ọ bụ naanị mkpara m ka m ji gafee Osimiri Jọdan a. Ma ugbu a, anyị dịzi ìgwè abụọ.+ 11 Ana m arịọ gị+ ka ị napụta m n’aka nwanne m nwoke Ịsọ, n’ihi na egwu na-atụ m na o nwere ike ịbịa lụso m ọgụ,+ lụsokwa ụmụ nwaanyị ndị a na ụmụ ha ọgụ. 12 Ma i kwuru, sị ‘N’eziokwu, m ga-emere gị ihe ọma, m ga-emekwa ka ụmụ* gị dị ọtụtụ ka ájá dị n’oké osimiri, nke a na-enweghị ike ịgụta ọnụ.’”+ 13 O wee rahụ n’ebe ahụ n’abalị ahụ. O si n’ihe ndị o nwere wepụta onyinye ndị a ọ ga-enye Ịsọ nwanne ya:+ 14 narị nne ewu abụọ (200), mkpi iri abụọ, narị nne atụrụ abụọ (200), ebule iri abụọ, 15 kamel iri atọ ndị ka na-enye ụmụ ha ara na ụmụ ha, nne ehi iri anọ, oké ehi iri, nne jakị iri abụọ, na oké jakị iri.+ 16 Ọ kpụụrụ ha n’ìgwè n’ìgwè kpụnye ndị na-ejere ya ozi ma sị ha: “Burunụ m ụzọ gawa. Unu agakọla ọnụ. Otu ìgwè ga-anọ n’ebe dịtụ anya n’ebe ìgwè nke ọzọ nọ.” 17 O nyekwara onye ga-ebute ụzọ iwu, sị: “Ọ bụrụ na Ịsọ nwanne m abịakwute gị ma jụọ gị, sị, ‘Ònye bụ onyenwe gị? Ebee ka ị na-aga? Ònyekwa nwe anụ ndị a na-aga n’ihu gị?’ 18 ị ga-asị ya, ‘Ọ bụ ohu gị Jekọb. Ihe ndị a bụ onyinye ọ sịrị ka e nye onyenwe m Ịsọ.+ Ọ na-abịa n’azụ anyị.’” 19 O nyekwara onye nke abụọ na onye nke atọ na ndị niile na-achị ìgwè anụ ndị ahụ iwu, sị: “Ọ bụ ihe a ka unu ga-agwa Ịsọ ma unu bịakwute ya. 20 Unu ga-asịkwa ya, ‘Ohu gị Jekọb na-abịa n’azụ anyị.’” Jekọb kwuru ihe a maka na ọ sịrị n’obi ya: “Ọ bụrụ na m jiri onyinye ndị a m ga-ebu ụzọ zigara ya mee ka obi jụrụ ya,+ o nwere ike iji obiọma nabata m mgbe m ga-emecha hụ ya.” 21 Ndị ozi ahụ wee chịrị onyinye ndị ahụ buru Jekọb ụzọ gawa. Ma n’abalị ahụ, Jekọb rahụrụ n’ebe ya na ndị ezinụlọ ya mara ụlọikwuu. 22 Mgbe e mechara n’abalị ahụ, o biliri kpọrọ ndị nwunye ya abụọ+ na ụmụ nwaanyị abụọ na-ejere ya ozi+ na ụmụ ya ndị nwoke iri na otu ma si n’ebe a na-eji ụkwụ agafe mmiri Jabọk gafee.+ 23 Ọ kpọọrọ ha kpọfee mmiri* ahụ, o bufetakwara ihe ndị ọzọ o nwere. 24 Jekọb mechaziri nọrọ naanị ya. Ya na otu nwoke wee malite ịgba mgba ruo mgbe chi bọrọ.+ 25 Mgbe nwoke ahụ hụrụ na ya emerighị Jekọb, o metụrụ Jekọb aka n’ọkpụkpụ úkwù ya, úkwù Jekọb wee chipụ ka ya na ya na-agba mgba.+ 26 Nwoke ahụ sịziri Jekọb: “Hapụ m ka m laa maka na chi abọwala.” Jekọb wee sị ya: “Agaghị m ahapụ gị ka ị laa ruo mgbe ị gọziri m.”+ 27 N’ihi ya, ọ jụrụ Jekọb, sị: “Gịnị bụ aha gị?” ya azaa ya, sị: “Jekọb.” 28 Nwoke ahụ sịziri ya: “Aha gị agaghịzi abụ Jekọb, kama ọ ga-abụzi Izrel*+ maka na gị na Chineke na ndị mmadụ agbaala mgba,+ n’ikpeazụ, gị emerie.” 29 Jekọb sịziri ya: “Biko, gwa m aha gị.” Ma ọ jụrụ Jekọb, sị: “Gịnị mere i ji na-ajụ m aha m?”+ O wee gọzie Jekọb n’ebe ahụ. 30 N’ihi ya, Jekọb kpọrọ ebe ahụ Penayel,*+ n’ihi na o kwuru, sị, “Ahụla m Chineke ihu na ihu, ma anwụghị m.”+ 31 Anyanwụ malitere ịcha ozugbo Jekọb hapụrụ Penuel,* ma ọ nọ na-ete ụkwụ.+ 32 Ọ bụ ya mere na ruo taa, ụmụ Izrel anaghị eri akwara na-adị n’úkwù anụ, n’ọkpụkpụ úkwù anụ, maka na nwoke ahụ metụrụ Jekọb aka n’úkwù, n’akụkụ akwara dị n’úkwù ya.
^ Mahaneyim pụtara “Ìgwè Ndị Agha Abụọ.”
^ Ma ọ bụ “ndagwurugwu.”
^ Izrel pụtara “Onye Ya na Chineke Gbara Mgba” ma ọ bụ “Chineke Na-agba Mgba.”
^ Penayel pụtara “Ihu Chineke.”
^ Ma ọ bụ “Penayel.”